एक बाइक व्हिलको साथ एक आर्क कसरी बनाउने - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> घरेलु हतियारहरू >> कसरी बाइक ह्विल आर्च गर्ने
कसरी बाइक ह्विल आर्च गर्ने
हामी विचार गर्ने छौँ कसरी बाइक व्हिलको रिमको साथ एक आर्च बनाउने। सिद्धान्तमा यो एक धेरै शक्तिशाली धनु हुनेछैन, तर यसको बारे करीव २० मिटरको दूरीमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ, र लक्ष्यको साथ रमाईलो गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ।
एक बच्चाको रूपमा म मैले दर्जनौं धनुहरू बनाए, सबै प्रकारका शाखाहरू, काठ र प्लास्टिकहरूको साथ। डोरी, बाइक ट्यूबहरू, इत्यादिको प्रयोग गर्दै तर यो कहिले पनि यस्तो भएका थिएन। र मसँग एउटा पुरानो पा wheel्ग्रा छ र म जान्दछु कि यो के गर्छ।
La आर्क निर्माण यो धेरै सरल छ। यस अवस्थामा यो २-इन्चको रिम हो जुन हामीले आधा काट्यौं र हामी स्पोमर्स हटाउँछौं। काट्ने पछि, किनारहरू राम्रोसँग फाइल गर्नुहोस् ताकि आफैंलाई काटिदिन र यदि तपाईं केही सुरक्षा राख्न सक्नुहुन्छ।
हामी स्प्याक्समा प्वालहरू को फाइदा लिन्छौं केहि स्पाइक राख्न को लागी तनावग्रस्त पारित गर्न को लागी धनु, जुन यस केसमा साइकल व्हिलको क्यामेरा हुनेछ।
अन्त्यमा हामी तीरलाई समर्थन गर्न स्पिकरको साथ सँगै व्हील हब प्रयोग गर्ने छौं र उद्देश्यका लागि स्फूर्तिको साथ बोल्यौं। यसलाई वर्णन गर्नु भन्दा तपाईं चित्रमा देख्न सक्नुहुनेछ
अहिले सम्म यो सामग्री संग हामी संग अधिक छ एक आधारभूत rco हुनेछ। तर यदि हामी थोरै कूलर संस्करण चाहन्छौं भने हामीसँग यो छ धनुष धनुष.
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, आर्च, बाइक रिममा कालो पेन्ट गरिएको छ र चराहरू र ड्रिपर रबर अधिक शक्ति प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एक वास्तविक आश्चर्य ... र यदि तपाइँ वाणहरू चाहनुहुन्छ बाँस एरो कसरी बनाउने वा तपाईं केहि कार्बन किन्नुहुन्छ, or वा € for को लागि
कसरी PVC पाइपको साथ एक आर्च बनाउने
यसको लागि कसरी सस्तो नायलन थ्रेड रिफिलहरू बनाउने ...
कसरी काठ बगैंचा फाटक बनाउन
कसरी बच्चाको गर्मी टोपी बनाउन
"बाइक व्हिलको साथ एक आर्च कसरी बनाउने" मा comments टिप्पणीहरू
जून,, २०१ 12 2014:११ अपराह्न
म तपाईंलाई जान्न चाहन्छु कि तपाईले ड्रॉपर रबर कहाँ पाउनुभयो, पहेंलो रंग, किनकि म सानो हार्पुन बनाउँदैछु र मलाई लाग्छ कि यो मेरो लागि ठूलो हुनेछ, यस लेखका लागि धेरै धन्यबाद।
अगस्त,, २०१4बिहान १२:2014०
मलाई लाग्छ कि यो धेरै वस्तुहरूको साथ धनु बनाउनु राम्रो विचार हो। प्रश्न: एरको धनुषलाई अझ शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ?
मे २,, २०१ 18 बिहान २::2017 बिहान
मलाई थाहा छैन कहाँ नरम छ तर अर्जेन्टिनामा तपाईं यसलाई हार्डवेयर स्टोरहरूमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यदि होईन भने, यो उही हो जुन केहि अस्पतालहरूमा सर्महरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।